12 Amakamelo Okuphunyuka Ahamba Phambili Emhlabeni | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 12 Amakamelo Okuphunyuka Ahamba Phambili Emhlabeni
Qeqesha Ukuhamba iBrithani, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi China, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Greece, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Isitimela Sokuvakasha eHungary, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe
(Kugcine ukubuyekezwa On: 05/11/2021)
Kuyajabulisa, ethusayo, ukusebenzisana, imihlaba engaphansi komhlaba, noma izindlu zasendulo, le 12 amakamelo okuphunyuka amahle kakhulu emhlabeni, akuzona ezenhliziyo ebuthakathaka. Ngokuphambene nalokho, kuphela abanesibindi, abadlali beqembu abanekhono nabathandi bephazili bazophumelela ukusindisa umhlaba, nokudalula izimfihlo esezikhohliwe. Uma ucabanga ukuthi ukutholile okudingekayo, bese ubhuka eyodwa yalezi 12 amakamelo okuphunyuka amahle kakhulu emhlabeni, bese uzama ukushaya izingqinamba.
1. Igumbi Lokubalekela E-Sherlocked Amsterdam
Yaqanjwa ngegama lomphenyi odume kakhulu emhlabeni, Igumbi lokuphunyuka elenziwe ngokungemthetho lingenye yamakamelo okuphunyuka ajabulisa kakhulu emhlabeni. KuSherlocked ungakhetha phakathi 2 okuhlangenwe nakho okuhluke kakhulu; Umakhi noma iVault. Enye yazo 60 imizuzu ubude, bese kuthi eyesibili ithi 80 imizuzu ubude, zombili zilungele iqembu le- 4 abantu, abazali nentsha bamukelwa kakhulu.
Nokho, umehluko omkhulu phakathi kwawo womabili amakamelo okuphunyuka kungumsebenzi ofanele. I-Architect izokuxazulula izimfihlakalo ekamelweni elisha ukuze kugcinwe izimfihlo zomhlaba ezigcinwe kakhulu. Ngokolunye uhlangothi, iVault izokwenza ukuthi ushintshe ama-personas abe ngamasela ukweba into eyigugu esisefweni esivikeleke kakhulu. Abaningi ngaphambi kwakho bazamile bahluleka, kodwa iqembu lakho kungaba yilona elizophumelela kulokhu kusebenza okuyimfihlo nokukhohlisayo. Ngakho, leli gumbi lokuphunyuka lijoyina izinto ezihlukile kunazo zonke ongazenza e-Amsterdam.
2. Balekela Ukuzingela Emhlabeni Wonke
Igumbi le-Escape Hunt linamagatsha ezindaweni eziningi emhlabeni, kusukela eNgilandi kuya eSingapore. Uma uthanda izidalwa ezingavamile, Izindaba zeDisney, no-Alice, lapho-ke uzolithanda leli gumbi lokuphunyuka futhi uzohamba ngenhloso yodwa ye-Escape Hunt, kuwo wonke amazwe.
Igumbi le-Escape Hunt linohlu lwamakamelo okuphunyuka, ehlukile kuwo wonke amazwe. EMarseilles, uzofuna abangane ngemuva kokuthi uHoudini ebenze baphela isekisi elikhulu, noma e-UK basize u-Alice nabangane ukuthi basindise iWonderland. Ngakho, amaphazili nezimfihlakalo zomhlaba zidinga usizo lwakho nokusebenzisa kahle amadolobha amakhulu kulo lonke elaseYurophu nase-Asia.
3. I-Enigma Quest eLondon
Kutholakala eFinsbury, ibangana elifushane ukusuka eLondon Bridge naseThames River, Enigma Quest Ukuphunyuka Izipesheli 3 izimfuno ezimangazayo. Uma uhamba nabangani, umndeni onabantwana, noma umbhangqwana ufuna ukuzidela, lapho-ke ungakhetha phakathi kwegumbi lokuphunyuka kwamanzi angaphansi kolwandle kanye ne-heist yesigidi-pound.
Uma ungumuntu ofuna i-adrenaline, mhlawumbe uThelma noLouise olandelayo? khona-ke izimfumbe ku-Enigma Quest zikulungele. Ku-Mission Wavebreak uzosindisa umhlaba, nakuMillion Pound Heist, uzodinga ukuhlangana ngomklomelo omkhulu kunayo yonke emlandweni wanamuhla. Ngakho, uma ucabanga ukuthi unakho okudingekayo, ke Impicabadala Quest Igumbi lokuphunyuka enhliziyweni yeLondon likwakhele i-epic 60-imizuzu ye-adventure yakho.
4. Iphrojekthi Yokuphazamiseka 2: Igumbi Lokuphunyuka Lwezincwadi E-Athene
Uma ungumuntu oshisekela ikamelo lokuphunyuka, bese kuba yiParadox Project 2 e-Athene yisipiliyoni segumbi lokuphunyuka. Ngokungafani namanye amakamelo okuphunyuka amangalisayo emhlabeni, i-Paradox Project mission ithatha yonke indlu ye-neoclassical e-Athene. Kulungile, ukufuna kwakho kusabalala emakamelweni amaningi nasezindleleni eziyimfihlo kule ndlu evelele.
Ngaphezu kwalokho, Igumbi lokuphunyuka esitolo sezincwadi yi- 200 imizuzu mission, lokho kungahlukaniswa kalula 5-6 amakamelo okuphunyuka anetimu. Ngakho, empeleni uzobe ujabulela okuhle kunayo yonke imihlaba, futhi lokho kuyigumbi lokuphunyuka eliyigugu. Isethi eklanywe kahle ngamaphazili, izikhala eziningi, izitebhisi, balindele abafuna injabulo ngaphakathi kwesitolo sangempela e-Athene.
5. UMnu. I-X Mystery House Shanghai
Uma ukhathele yi- amabhilidi e Shanghai, UMnu. Indlu yama-puzzle ka-X izoba ikhefu elihle ukusuka edolobheni eliphithizelayo. Le ndlu yokuphunyuka emangalisayo inayo 5 amakamelo, ngamunye unemfihlakalo ehlukile okufanele ayixazulule. Ukhiyelwe egumbini ihora lonke, ngaphandle kwanoma yimuphi umbono wesithombe esikhulu. Inselelo ukusebenzisa yonke into esegumbini, ngisho nomgwaqo, ukuzama ukuthola indlela yokuphuma egumbini.
UMnu. Amakamelo okuphunyuka e-X agcwele izimfihlakalo nezinselelo. Ngokuphambene namanye amakamelo okuphunyuka amnandi emhlabeni, lapha iqembu lakho lizodinga ukusebenzisa zonke izinzwa, ukubheka, nengqondo, ukuthola nje indlela yokuphuma egumbini. UMnu. I-X Mystery House isenkabeni yeBridge 8 II, Isifunda saseHuangpu, lapho i-adventure iqala khona ukusuka emnyango.
6. Izikebhe Zokuphunyuka Nezindawo Zokuphunyuka ze-SOS eDublin
Igumbi elingavamile lezikebhe ze-Escape edolobheni laseDublin lingenye ephezulu 10 amakamelo okuphunyuka emhlabeni. Lapha, uzodinga ukubeka wonke amandla akho namandla ndawonye futhi uthole indlela yokuphuma esikebheni. ngempela, Amakamelo e-Escape Boats namagumbi e-SOS atholakala esikebheni, ethekwini laseDublin.
Ngakho-ke, Igumbi lokuphunyuka Izikebhe nama-SOS ngamanye amakamelo okweqa akhethekile emhlabeni. Indlela yokuphuma igcwele amapuzzle, ikhodi-ukuqhekeka, nokuxazulula imfihlakalo. Uma igumbi lokuphunyuka liyingxenye yomkhosi okhethekile, inkampani ingahlela ngisho nokudla komunwe kusuka imigoqo eseduze edokheni le-canal.
7. Igumbi lokuphunyuka eParaPark Budapest
Imfihlakalo enkulu kunazo zonke eBudapest ikulindile egumbini lokuphunyuka laseParaPark. Uzokwehla ukuthola imikhondo ilele egumbini lokuqala lokuphunyuka eYurophu. Lapha, uzozithola usesimweni sobugebengu, Ama-Twin Peaks aphefumulelwe. Ngakho, zilungiselele ukudlala umseshi, futhi usize iqembu lakho ukuphuma ebhokisini, njengoba ucabanga ngaphandle kwebhokisi, noma engaphansi, ngalokho.
Isimo Sobugebengu 95 ise-NYC, lapho amaqembu ehlasela imigwaqo, futhi kwenzeka usizi. Ngakho, uzobizwa ukuthola ukuxazulula izinkomba, gcina amaphepha ukuthola isigebengu ngaphambi kokuphela kwehora. ukuze uphethe, Igumbi lokuphunyuka leParaPark elenzelwe abathandi bezindaba ezijabulisayo nezinhliziyo zobugebengu.
IVienna iya eBudapest Ngesitimela
EPrague uye eBudapest Ngesitimela
EMunich iya eBudapest Ngesitimela
I-Graz iya eBudapest Ngesitimela
8. Igumbi iBerlin
Igumbi linalo 4 ohambweni, ngamunye 75 imizuzu ubude, inselelo ngayinye, futhi ngakunye kuzodingeka uhambe ngesikhathi uye kwenye indawo. Ukuzingela umcebo eHumboldt University, i-internship nomzingeli omkhulu wesipoki, noma ukusiza umphenyi omkhulu waseBerlin ukuthi abambe uMbulali waseBerlin, kusobala ukuthi le mishini akuyona eyomdlali osaba kalula.
Ngakho-ke, khetha inselele yakho ngokucophelela, futhi woza uhlome kahle ngama-wits, ingubo, nenhliziyo enesibindi. Ukuphunyuka kwegumbi eBerlin kuyinto 2017 Owinile we-Golden-Lock, yakhelwe ukuphonsela inselelo noma yimuphi umuntu othanda igumbi lokuphunyuka. Ngaphezu kwalokho, leli gumbi lokuphunyuka lilufanele ngokuphelele uhambo oluya eBerlin, okwesibili nokwesihlanu.
IFrankfurt iya eBerlin Ngesitimela
ILeipzig iya eBerlin Ngesitimela
IHanover eya eBerlin Ngesitimela
9. Igumbi Lokubalekela Amathuna EParis
Leli gumbi lokuphunyuka elingavamile eParis lingelabantu abathanda isibindi kuphela. Uma ungakatholi igama, ikamelo lamathuna lokuphunyuka likuthatha ikhulu leminyaka ubuyele endaweni yobumnyama emhlabeni ongaphansi komhlaba waseParis. Ngenkathi iParis ingenye yezinto ezinhle kakhulu lamadolobha amahle emhlabeni, amathuna ayo angamakhulu ayisikhombisa, kanti abanye bazothi ukwethuka okuncane.
Ngakho, uma uthatha ubungozi enhliziyweni, futhi ama-goosebumps awawona umuzwa ongajwayelekile, bese ubhukha igumbi lokuphunyuka. Ukudlala umdlalo wegumbi lokuphunyuka lapha kuzoba yinto ejabulisayo noshintsho olusha ekuvakasheni izingadi, noma ukuthenga ngaphakathi Paris.
Amsterdam eParis With A Isitimela
ILondon iye eParis Ngesitimela
IRotterdam iya eParis Ngesitimela
IBrussels iya eParis Ngesitimela
10. Igumbi Lokuphunyuka LaseHarry Potter ePrague
Ukuphunyuka kwegumbi likaHarry Potter kungumsebenzi womndeni. Ukuhlobisa namapuzzle kuyamjabulisa izingane, ngezinombolo ezisebenzisanayo izingane ezingakwazi ukuxhumana nazo. Ngaphezu kwalokho, wena nezingane nizothola izintambo zomlingo, ngakho-ke bangathola umhlaba okhethekile kaHarry Potter.
Igumbi lokuphunyuka iHarry Potter ePrague yi- 60 imizuzu mission. Ngalelihora lomlingo, Ithimba lakho lizodinga ukuthola izinto zobuciko ezintathu ezifihliwe emfihlakalweni u-Harry Potter igumbi lokuphunyuka, Igumbi Lokuphunyuka LaseHarry Potter yisikhathi esimnandi nesijabulisayo somndeni wonke ePrague.
INuremberg iya ePrague Ngesitimela
UMunich uya ePrague Ngesitimela
IBerlin iya ePrague Ngesitimela
IVienna iya ePrague Ngesitimela
11. Umdlalo Wangaphandle Wokuphunyuka e-Villa Borghese Rome
Wonke umuntu uya e-Italy eyokudla, izindlu, futhi iwayini wendawo. Ngobuhlanya bamakamelo okuphunyuka anqoba umhlaba, Izindawo eziphezulu zase-Italy sezibe amakamelo okuphunyuka amangalisa kakhulu. IVilla Borghese emangalisayo iyindawo yokuqala eya ku- 2.5 amahora wokuxazulula iphazili. Indawo yokuhlala iyigumbi lokuphunyuka ngaphandle lapho uzobe usudlulela phambili kusuka emkhombeni uye ekukhonjisweni ngesikebhe.
Leli gumbi lokubalekela eliyingqayizivele liseRoma. Ngakho, lapho uqeda ukuhlola iColosseum, uzothola izindawo ezinhle ezifihliwe enhlokodolobha yase-Italy. ukuze uphethe, IVilla Borghese yigumbi lokubalekela elingaphandle elihle kakhulu eYurophu. Ngokungafani nezindlu zangaphansi, imitapo yolwazi, namathuna amathuna, lapha uzohlanganyela endaweni enhle kakhulu yase-Italy.
IMilan iya eRoma ngesitimela
UFlorence uya eRoma ngesitimela
IVenice iya eRoma ngesitimela
Naples eRome With A Isitimela
12. Igumbi Lokuphunyuka Lelabhorethri Bunschoten
Ihora ukusuka e-Amsterdam, Igumbi lokuphunyuka elebhu eBunschoten liyifanele ngokuphelele idrayivu noma uhambo ngesitimela from any location in Europe. IBunschoten inayo 3 amakamelo okuphunyuka, kepha iLaboratory iyona ehamba phambili, futhi elinye lamagumbi okuphunyuka amahle kakhulu eYurophu.
Ukuqedela umsebenzi oyinselele, you will step into Dr. Ilebhu kaSteiner, njengoba nje wayishiya eminyakeni engu-7o + edlule. Umsebenzi wakho kuzoba ukuthola ukuthi kwenzekeni kudokotela ompofu, futhi uzodinga ukuqoqa wonke amandla akho namasu akho ukuxazulula le mpicabadala kuphela 60 amaminithi. Ngokusobala, ungaletha 2-3 ababambisene nomsebenzi, ngakho khumbula ukubhuka kusengaphambili.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza ukuxazulula izimfihlakalo ezinkulu zomhlaba. Ohambweni ngalunye lwegumbi lokuphunyuka olumnandi luhambo nje lwesitimela kude nomnyango wakho wokungena.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Igumbi Lokubaleka Elihle Kakhulu E-12 Emhlabeni” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Fbest-escape-rooms-world%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, futhi ungashintsha i- / es ibe yi- / fr noma / de nezinye izilimi.
23 Izinhlelo ze You Need Download Ngaphambi Okuhambayo
Izincwajana zemininingwane ezezimali, Ukuhamba Ngezitimela, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Izikhangibavakashi Europe